संकटमा ओली ! पार्टीमा विदेशी लगानी «
संकटमा ओली ! पार्टीमा विदेशी लगानी
प्रकाशित मिति :4June, 2019 9:38 pm
कमल कोइराला पूर्व प्रधानमन्त्री एवम नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता मातृकाप्रसाद कोइरालका सुपुत्र हुन् । कोइराला परिवारमा जन्म लिएर कम्युनिष्ट बिचारधार अंगाल्ने उनी कोइराला परिवारका एक्लो बृहस्पति हुन् ।
तत्कालिन एमालेको सक्रिय राजनीति गरी दक्षिण कोरियाको राजदूत तथा एमालेको केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटीको सदस्य र सांसद समेतको अनुभव बोकिसकेका कोइराला हाल सत्तारुढ दल नेकपाको साधारण सदस्य हुन् ।
संकटमा ओली– उमेरले ८३ छुन लागेका कोइराला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै मामिलामा त्यत्तिकै ‘अपडेट’ छन् । उनका अनुसार अहिलेको सरकार र नेकपामा संकट उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा रहेकाबेला नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीमा आफनो भाग खोज्नु सामान्य विषय नभएको उनी बताउँछन् । प्रचण्डले अबको प्रधानमन्त्री आफू भएकाले ओलीसंग महत्वपूर्ण ‘डिल’ गर्न जरुरी नभएको सन्देश भारतलाई दिएको कोइरालाको दावी छ ।
पार्टीमा विदेशी लगानी– नेकपा सरकारमा मात्र होइन यसको आन्तरिक राजनीतिमा पनि विदेशीको प्रभाव रहेको कोइरालाको दावी छ । खासगरी पार्टीका आन्तरिक समीकरण मिलाउन र महाधिवेशनमा कसलाई जिताउने हराउने भन्ने कुरामा समेत विदेशी शक्तिले लगानी गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । विगतमा नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा छिमेकी राष्ट्रले सिधै लगानी गरेको आफूले समेत थाहा पाएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक मामिलामा पनि विदेशीले लगानी गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । कांग्रेसमा सन्त, आदर्श र आर्थिक मामिलामा निकै इमान्दार मानिएका नेताका नाममा कांग्रेसकै एक प्रभावशाली नेताले २० करोड रुपैयाँ बुझेको उनी बताउँछन् ।
बालुवाटारका सबै सूचना ‘लिक’ -पूर्वराजदूत समेत रहेका कोइराला भन्छन् , ‘ बालुवाटार, सिंहदरवारदेखि शक्तिशाली नेताहरुका बेडरुममा समेत विदेशी जासुसी संस्थाले सूचना संयन्त्र स्थापना गरेका छन् । मान्छेबाट नहुने काम उनीहरुले मेसिनबाट गर्छन् । महत्वपूर्ण र संवेदनशिल कुरा हुने ठाउँमा उनीहरुले थाहा नहुने गरी निकै सानो यन्त्र फिट गरेका हुन्छन् जसको माध्यमबाट त्यहाँ हुने सम्पूर्ण कुरा उनीहरु सिधै सुन्छन् । यसरी सूचना लिक हुने गरेको छ । अहिले मलाई आशंका छ, बालुवाटार, सिंहदरवार लगायत नेताहरुका घरमा यो प्रकारको जासुसी उपकरण जडान गरिएको छ । ’
देब्यानी र दीपेन्द्रको संवाद ‘सिआईए’ संग– दरवार हत्याकाण्ड हुनु केही घण्टा अगाडि योजनाबद्धरुपमा विदेशी जासुसहरुले बिभिन्न संयन्त्र मार्फत देव्यानीलाई युवराज दिपेन्द्रलाई फोन गराएका थिए । त्यो संवाद रेकर्ड गएिको छ । दरवारमा आयोजित भोज समारोहको बस्तुस्थिति र त्यहाँको सूचना थाहा पाउन त्यो फोन गराइएको थियो । म दावीकासाथ भन्छु, त्यो संवाद अहिले पनि छ । तर, कसले खोजेर ल्याउने ?
दरवार हत्याकाण्ड विदेशीको योजनामा भएकाले यसको सत्यतथ्य सहजै बाहिर नआउने कोइराला बताउँछन् । ठूलाठूला हत्याकाण्ड ‘हाइली सोफेस्टिकेटेड’ तरिकाले हुने भएकाले यसका प्रमाणहरु फेला पार्न असम्भव जस्तै हुन्छन् । अब त १८ वर्ष वितिसके, गाहे छ । मदन भण्डारी हत्याकाण्ड पनि यस्तै हो । रहस्य के को पत्ता लाग्नु !
गिरिजा राष्ट्रपति नबन्नुको कारण– गिरिजाप्रसाद कोइराला गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनेको भए मुलुकको राजनीतिक कोर्सले अर्कै गति लिने कोइरालाको दावी छ । उनी भन्छन्, ‘ गिरिजा राष्ट्रपति भएको भए मुलुक स्थिरतातर्फ जान्थ्यो । ५ वर्ष सरकार मज्जाले चल्थ्यो । जो प्रधानमन्त्री भएपनि गिरिजाप्रसादमै शक्ति केन्द्रीत हुन्थ्यो । यही थाहा पाएर भारतले कहिले माधव नेपाल त कहिले रामराजाप्रसादलाई उचाल्यो । प्रचण्ड प्रयोग मात्र भए । गिरिजाको भारतसंग सम्बन्ध चिसिदा मुलुक अस्थिर बन्न पुग्यो । ’
सुशीलको निधनको रहस्य– धेरै मानिसहरुले अहिले पनि सुशील कोइरालाको निधनमा षडयन्त्र थियो, हत्या हो की भनेर शंका गर्छन्, त्यो होइन । उनको निधनको कारण सहयोगीहरुले चरम लारवाही हो। अतुल, मृदुला जस्ता उनका सहयोगीले लापरवाहीले सुशीलले ज्यान गुमाए । सुशील विरामी थिए । तर, उनलाई पनि मरिन्छ नै भन्ने लागेको थिएन । उनका सहयोगीहरुले त झन ध्यान नै दिएनन् । लापरवाही भयो । समयमै अस्पताल नलैजानु नै ठूलो लापरवाही हो । यसमा अरु शंका गर्नुपर्ने केही छैन ।
मोदीको आश गर्नु वेकार– वरिष्ठ पत्रकार समेत रहेका कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र ल्याउन दवाव दिने कुरा अनावश्यक भ्रम मात्र भएको बताए ।
उनी भन्छन्, ‘ नेपालमा सबै शक्तिको मन राख्न हुन्छ, हुन्छ भनेपनि धर्म र राजसंस्थाका विषयमा मोदीले चासो दिने छैनन् । जुन संस्थालाई यत्रो मेहनत गरेर हटाइयो, त्यसलाई किन पुनस्र्थापित गर्ने ? बाहिर बाहिर हिन्दू धर्म भनेपनि उनले यसका लागि लबिङ चाहिं गर्ने छैनन । ’
कोइरालका अनुसार अहिले नेपाल मामिलामा भारत र अमेरिकाको समान दृष्टिकोण छ । चीन आफनो ‘साइलेन्स डिप्लोमेसी’ मा छ ।